UDaniel Martín Serrano. Ingxoxo nombhali we Insomnia | Izincwadi Zamanje
UDaniel Martín Serrano. Ingxoxo nombhali we-Insomnia
UDaniel Martin Serrano ukhonjiswe okokuqala kule noveli ngesihloko esimnyama, Insomnio. Kepha le Madrilenian isivele inomlando omude njengoba uchungechunge lombhali ithelevishini phakathi kwayo kukhona Isibhedlela Esiphakathi, velveteen, Blind kuya aphoyintimenti, Isikhulu, Ukukhaphela y Izilwandle eziphakeme. Ngaphezu kwalokho, unguprofesa weTelevishini Script eMadrid Film School. Kulokhu ingxoxo Usitshela ngenoveli yakhe nokunye okuningi. Ngiwazisa kakhulu umusa nesikhathi ukuthi unginikele kimi.
UDaniel Martín Serrano - Ingxoxo
UMBHALO NAMUHLA: Ngakho-ke kubanda, isigqi nobuchule bokubhala noma isigqi senoveli namasu?
UDANIEL MARTÍN SERRANO: Ekugcineni kumayelana nokuxoxa indaba. Amasu ahlukile, yebo, kodwa yini eyenza umehluko omkhulu umbhalo wenoveli yindlela yokusebenza. Izikripthi zokubhala kungumzamo weqembu lapho abantu abaningana babamba iqhaza futhi unombono wabakhiqizi, amanethiwekhi namapulatifomu, izinqumo eziningi zenziwa ndawonye. Ngaphambi kwenoveli, yimina ngedwa owenza lezi zinqumo, yimina onquma ukuthi kwenzekani nokuthi kwenzeka kanjani. Futhi ngokungafani nendlela yokusebenza kwesikripthi, kwesinye isikhathi inkululeko enginikezwa yinoveli iyaziswa.
Kepha angikhethi iskripthi noma inoveli noma okungenani nginenkinga enzima yokukhetha eyodwa noma enye. Ezimweni eziningi yindaba ofuna ukuyixoxa enquma ukuthi ifuna ukuxoxwa kanjani, uma kungumbhalo, inoveli, indaba ngisho nomdlalo.
AL: Ngomsebenzi omude njengombhali wesikrini, manje usuqala ukwenza izincwadi ezihlanzekile nezilula ngenoveli emnyama emnyama, Insomnio. Kungani futhi sikuphi kuwo?
I-DMS: Cishe kuyo yonke imikhakha umuntu uphakamisa izinselelo ezintsha futhi ukungibhalela le noveli kwaba. Ngemuva kweminyaka ngibhala imibhalo futhi ngiqale amanye amanoveli nginqume ukuthi kufanele ngiqede eyodwa ngikhombise ukuthi ubekwazi ukwenza kanjalo. Lokho kwaba yisikhuthazo sami sokuqala. Njengoba ngikwazile ukuyishicilela sekuvele kudlula engikulindele okokuqala.
En Insomnio umfundi uzothola i- inoveli emnyama, emnyama kakhulu, eneziza ezimbili, eyodwa ibaliwe esikhathini esedlule futhi enye okwamanje. Esokuqala, i-protagonist, UThomas Abad, ungumhloli we iphoyisa ophethe ukuthola i- umbulali yabesifazane abahlukahlukene. Njengoba icala liqhubeka uzokuthola lokho umfowabo ngandlela thile abathintekayo. Ukuzama ukukuvikela kuzogcina ngokulahlekelwa ngumsebenzi.
Engxenyeni yamanje, uTomás usebenza ubusuku njenge umantshingelane kusuka emathuneni nalapho, ehlukunyezwa ngumuntu ocashe emthunzini, uyabona ukuthi icala alikavalwa.
Insomnio inoveli ene itulo elixhuma ngokuya landa futhi lokho akumniki ithuba umfundi. Ine- kakhulu umoya omuhle, umlingiswa oholayo walabo abangena emphefumulweni wakho futhi, akulungile kimi ukukusho, kodwa kunjalo kubhalwe kahle kakhulu. Manje sekuzoba ngabafundi okumele bahlulele.
AL: Ukubuyela emuva ngesikhathi, uyayikhumbula incwadi yokuqala oyifundile? Nendaba yokuqala oyibhalile?
I-DMS: Ukufundwa kwami ​​kokuqala, njengalokho okwakwenziwa abaningi besizukulwane sami, kwakuyizincwadi eziseqoqweni le-B.Ukugoba umusi, Abayisihlanu, uJules Verne, u-Agatha Christie...
Ngokuqondene nento yokuqala engiyibhalile anginayo inkumbulo ecacile, ngiyakwazi lokho eskoleni lapho kwakufanele ubhale okuthile bejwayele ukugqama. Kancane kancane, yebo, ngaqala ukubhala indaba futhi ngadala kanjalo uhlobo oluthile lwesidingo lokho kwangiholela ekubhaleni okuningi nangaphezulu. UPessoa uthe ukumbhalela kwakuyindlela yakhe yokuba yedwa futhi ngiyavumelana nalokho.
AL: Leyo ncwadi ethinte umphefumulo wakho ...
I-DMS: Iningi. Angikwazanga ukukhetha eyodwa. Lezo zincwadi engazi kuzo umsebenzi wombhali ngemuva kwazo zingimakile. Ngingakubiza ngegama Izinyosi, kusuka eCela, Kuthambile ubusukunguFitzgerald, Umuzi Nezinja, nguVargas Llosa, Ukukhala kwesikhova, nguHighsmtih, uNefando nguMonica Ojeda, iningi lamanoveli kaMarías ...
AL: Futhi lowo mbhali oyintandokazi yesithenjwa noma ugqozi? Ungakhetha ngaphezu kweyodwa nakuzo zonke izinkathi.
I-DMS: Mhlawumbe kunjalo UJavier Marias umbhali ongasho kakhulu okungithonyayo. Ngaqala ukumfundela ngaleso sikhathi lapho kuqala ukucaca ukuthi ngifuna ukuzinikela ekubhaleni. Isitayela sakhe, indlela yakhe yokutshela yinto engiyicabanga kakhulu. Kepha kunezinye eziningi: UVargas Llosa, uGarcía Márquez, uLobo Antunes, URichard Ford, uPatricia umkhandi ophezulu, UJoyce Carol Oates, USofi Oksanen, uMartín Gaite, UDostoevsky, I-Pessoa...
AL: Yimuphi umlingiswa wezemibhalo owawungathanda ukuhlangana naye futhi umakhe?
I-DMS: Inoveli engivame ukuyifunda kakhulu IGatsby Enkulu futhi ungomunye wabalingiswa engibathanda kakhulu emibhalweni. Wonke umsebenzi kaFitzgerald ugcwele izinhlamvu ezinezendlalelo eziningi ozithola ekufundeni okusha ngakunye. Futhi uGatsby ungomunye wabalingiswa engibathandayo.
I-DMS: Anginayo imania ephawuleka kakhulu uma kukhulunywa ngokubhala. Engingakusho yilokho Nginonembeza impela, ngibhala futhi ngibhala kabusha okuningi ngize ngigculiseke ngomphumela. Angiyena umbhali osheshayo, ngicabanga futhi ngizindle kakhulu ngezinyathelo okufanele ngizithathe zombili encwadini nasembhalweni ngoba ngiyaqiniseka ukuthi umsebenzi omuhle ukhokha imiphumela emihle.
Futhi umsebenzi wokubhala usengumsebenzi futhi, ngenxa yalokho, Ngizama ukubhala nsuku zonke, Nginohlelo lwami, angiyena omunye walabo abathathelwa ugqozi, luhlala kancane kakhulu. Futhi Ngithanda ukuba namaphrojekthi amaningi ngesandla ngasikhathi sinyeNgakho-ke lapho ngibambeka kokukodwa, ngingathatha enye bese ngiqhubeka ngiya phambili. Kuyindlela enhle yokunqoba ukuvinjelwa, ukuvumela izindaba ziphumule isikhashana.
Y ngesikhathi sokufunda mhlawumbe okuwukuphela kokuzilibazisa engingaba nakho ukuthi ngidinga ukuthula, lutho ukungiphazamisa.
I-DMS: Imvamisa ngibhala ekhaya, kepha ngezikhathi ezithile ngithanda ukushintsha ngiye ku- indawo yokudlela, eyodwa umtapo wolwazi. Lokho kuguqulwa kwenkundla, ngomqondo ongokomfanekiso, Kuyangisiza ukuphuma emoyeni nokungabi nomuzwa ojwayelekile wokusebenza njalo endaweni efanayo. Kuyiqiniso ukuthi ubhadane luguqule lo mkhuba kimi, kepha ngethemba ukuthi kwesinye isikhathi ngiyakwazi ukuwuqala kabusha.
AL: Izinhlobo eziningi zemibhalo ezikuthandayo?
I-DMS: Iqiniso lokuthi inoveli yami yokuqala ingelohlobo lobugebengu noma lobugebengu akusho ukuthi luhlobo lwami engiluthandayo, empeleni, angiyena umfundi omkhulu wezinganekwane zobugebengu. Empeleni engikuthandayo, yize kubonakala kuyiqiniso, yizincwadi ezinhle. Futhi iyiphi incwadi enhle kimi? Lowo okuthi uma uqeda ukuyifunda wazi ukuthi izokukhapha impilo yakho yonke, lapho ngibona khona ukuthi ngemuva kukhona umbhali okahle futhi ngibona umsebenzi onale noveli, ongenza ngicabange, ongishiya ngemuva. Futhi incwadi enhle iyona futhi eveza umona othile kimi, umona onempilo, ngokungazi noma ngelinye ilanga ngiyokwazi yini ukubhala into enjalo.
AL: Ukufunda kwakho kwamanje? Futhi ungasitshela ukuthi ubhalani?
I-DMS: Ukufundwa kuyanqwabelana, Ngithenga ngaphezu kwesikhathi enginaso sokufunda. Ngijwayele ukufika sekwedlule isikhathi ezindabeni ngakho njengamanje ngiyafunda UBerta Isla, nguJavier Marías, futhi nginabanye abaningi etafuleni abalinde ithuba labo.
Futhi maqondana nalokhu engikubhalayo, njengamanje ngingu ukusebenza ochungechungeni engisakwazi ukutshela okuningi ngalo kodwa lokho kuzobona ukukhanya ngonyaka ozayo futhi ngazama ukubumba engingathanda ukuthi kube yikho inoveli yami yesibili. Ukuguqulwa kwerejista, inoveli esondelene kakhulu neyomuntu siqu ekhuluma ngothando, hhayi inoveli yothando, kodwa inoveli ngothando nokuthi silubona kanjani noma siphila ngalo kuyo yonke le minyaka, kusukela ebusheni kuya kulokho esikubiza ngobudala obuphakathi.
I-DMS: Kunzima. Ngicabanga kukhona uhlobo ukuphuthuma kokufuna ukushicilela lokho kwesinye isikhathi kunqoba okuthile okubaluleke kakhulu kunalokho okuyikho ngifuna ukubhala. Noma iyiphi incwadi, noma ngabe inoveli, i-eseyi noma olunye uhlobo, idinga isikhathi sokusebenza, ukubhala okuningi nokubhalwa kabusha futhi kunginika umuzwa wokuthi ziyashicilelwa futhi, ngaphezu kwakho konke, amanoveli angasebenzi ngokwanele ayashicilelwa.
Inhloso yalabo ababhalayo ukushicilela, kunjalo, kepha umbhali kumele azifunele yena, hhayi noma yini ewusizo ukuthi ishicilelwe noma ngabe umuntu uyifuna kangakanani, kufanele unciphise i-ego kakhulu lapho ubhala. Elinye iphuzu elibi njengoba lishicilelwa njengamanje ukubona ukuthi amanoveli amahle kakhulu anganakwa kanjani futhi amanye angakhanyi kangako aphumelela. Kwesinye isikhathi ukuphakanyiswa kumanethiwekhi omphakathi kusebenza ngaphezu kwekhwalithi yenoveli uqobo. Ngiyethemba ukuthi lokhu kuyashintsha.
AL: Wawungacabanga ngeskripthi somzuzu obalulekile esiphila kuwo? Ungakwazi ukunamathela kokuthile okuhle noma okuwusizo ezindabeni ezizayo?
I-DMS: Bezilokhu zikhona izindaba zohlobo lwe-apocalyptic okuthi, ngalokhu kwe-covid, kube esiseduzane kakhulu kubo. Kuyiqiniso ukuthi ukuyiphila kumuntu wokuqala kwehlukile, kepha uma bekufanele ngihlale nokuthile okuhle, kuhambisana amandla okukhuthazeka kwengqondo sonke esikufundile ukuwakhulisa. Kuyiqiniso ukuthi kwesinye isikhathi kubonakala sengathi umuntu ufinyelele umkhawulo wokuzihlukanisa, isithukuthezi futhi angaboni ukuphela kwaleli phupho elibi. Kepha ngicabanga ukuthi, ngokujwayelekile, ngubani omunye ongazi ukuthi angabhekana kanjani nayo ngendlela engcono kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Izingxoxo » UDaniel Martín Serrano. Ingxoxo nombhali we-Insomnia
Indlela ende eya ekhaya